भागरथी हत्या प्रकरणको ‘भित्री कथा’, अर्की निर्मला पन्तको अवसान – Satyapati
भागरथी हत्या प्रकरणको ‘भित्री कथा’, अर्की निर्मला पन्तको अवसान
काठमाडौं । १७ वर्षीया भागरथी भट्ट बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी स्थानीय बासिन्दा हुन् । उनी सोही ठाउँको सिर्कोटस्थित सनातल धर्म माध्यमिक विद्यालयमा वाणिज्य संकायमा कक्षा १२ मा पढ्थिन् । सदाझैं उनी बुधबार पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन विद्यालयमा पुगेकी थिइन् । उनले विद्यालयमा सो दिन राम्रैसँग अध्ययन गरिन् । उनलाई थाहा थिएन यो दिन नै जीवनको अन्तिम दिन हो भनेर । विद्यालयमा साथीहरुसँग हाँसखेल गरिन् ।
विद्यालयको पढाइ सकिसकेपछि उनी घरमा एक्लै रहेकी वृद्ध आमालाई सहारा दिन हतारहतार घर फर्किदै थिइन । उसै त जङ्गको बाटो हिड्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि त्यो दिन उनी जङ्गलको बाटोमा एक्लै परिन । साथीहरुले हामी कपाल काटेर आउँछौं, तिमी हिँड्दै गर भने त्यसपछि उनी एक्लै जङगलको बाटोमा हिँडिन् । तर दैवको लिला ! यी १७ वर्षीया किशोरी सदाझैँ घरको दैलोमा पुग्न सकिनन् । विद्यालय र घरको बीच बाटोमै उनले यो संसार त्यागिन् ।
आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाउन विद्यालय हिँडेकी छोरी घर आउलिन, खाना पकाउलिन आमाछोरी आनन्दले खाउँला भन्ने उनकी आमा द्रोपती भट्टको सपना निमेषभरमै तुहियो । बुधबार साँझसम्म पनि स्कूल गएकी छोरी घरमा नआएपछि उनी अत्तालिन पुगिन । उनले गाउँलेलाई हारगुहार गरिन् । तैपनि उनको अत्तोपत्तो हुन सकेन । बिहीबार स्कूलबाट फर्किनेहरुले लबलेक सामुदायिक वनमा बनमारा झाडी माडिएको देखे र तत्काल गाउँलेलाई खबर गरे । त्यसपछि सिङ्गो गाउँ नै उनको खोजीमा दौडियो ।
हुन पनि सोही बनमारा झाडीमा उनको शव भेटियो । उनको खोजीमा सो ठाउँमा पुगेकाहरुको आँखामा आँसुको फोहोरा छुट्यो । आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाउँदै गरेकी छोरी, जीवनको खुसियालीमा रम्दै गरेकी छोरीको मृत्युको खबरले आमा द्रोपतीको अवस्था कस्तो भयो होला ? यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न । जब उनको कानमा यो खबर पुग्यो त्यसपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन । उनको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्कीका अनुसार अनुसार आमाकोे अब एउटै चाहना छ छोरीको बीभत्स हत्या गर्ने अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय होस् ।
थाहा छैन समयले उनलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको हो या उनलाई कुनै नरपिशाचले बीभत्स हत्या गरेको हो । ‘घटनाको प्रकृति हेर्दा उनको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या गरिएको जस्तो देखिन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले टाढैबाट शवलाई देख्यौ । उनलाई कुन नरपिशाचले घाँटी थिचेर हत्या नै गरेको छ । उनको शरीरभरि चोटैचोट छ । अब हामी पोष्टमार्टम रिपोर्ट पर्खिरहेका छौं ।’ भागरथीको शव फेला परेपछि पालिका नै शोकमा डुबेको छ ।
कसरी सम्हालिन्छिन् आमा द्रोपती ?
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उनको बुबाको दुई महिनाअघि धनगढीमा सुगरको समस्याका कारण मृत्यु थियो । त्यसपछि उनको परिवारमा आमा, दाइ र उनी मात्र थिए । दाइ रोजगारीको सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा थिए । यो घटना भएको थाहा पाएपछि दाइ हतारहतार दिल्लीबाट घर फर्किएका छन् । आमा द्रोपतीलाई जीवनसाथी गुमाएको पीडा मत्थर नहुँदै दैवले झन अर्को पीडा थपिदिए । श्रीमानको अनुहार बिर्सिन उनीसँग भागरथी थिइन् ।
उनैलाई समयले बीभत्स मृत्युको खाडलमा हालिदियो । अब द्रोपतीका आँखामा आँसु पनि सुकिसकेका छन् । उनी विक्षिप्त छिन् । उनका आँखा सुकेका छन् । अब छोरीले बिरामी परेका बेला कहिल्यै तातो पानी दिनेछैनन् । एक्लो घरमा उनी एक्लै भावविह्वल अवस्थामा छिन् । छोरीको अन्त्येष्टि नहुँदासम्म उनको घरमा बाक्लै मान्छे हुनेछन् तर त्यसदिनपछि भने उनी एक्लै घरमा हुनेछिन् । त्यस दिनपछि उनी कसरी समहालिन्छन् ?
अब उनीसँग जीवनका दुबै विश्वासका पात्रहरु यो संसारमा जीवित छैनन् । श्रीमान बितेको पीडामै रहेका द्रोपतीलाई सन्तान गुमाउँदाको पीडाले झनै थिचेको छ । भागरथी बीभत्स अवस्थामा फेला परेकीले बलात्कार गरी हत्या गरिएको आशंका आफन्तको छ । कपडा च्यातिएको, शरीरमा नीलडाम, घाउ, यौनाङ्गमा रगत, घाँटी निमोठेको अवस्थामा शव फेला परेपछि बलात्कारपछि हत्या भएको मृतकका काका शिवराज भट्टले बताए । कपडा च्यातिएको, शरीरमा नीलडाम, घाउ, यौनाङ्गमा रगत, घाँटी निमोठेको अवस्थामा शव फेला परेपछि बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ ।
घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनकराज पाण्डेले प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन हरतरहले अनुसन्धान गरिरहेको बताए । घटनास्थलमा उनको मोबाइल पनि भेटिएको छ । तालिम प्राप्त कुकुरको सहयोगमा ३ दिनपछि घटनास्थलमै भेटिएको मोबाइलबाट डिलिट भएका सबै म्यासेज, अडियो–भिडियो र कलको विवरण निकाल्न प्रहरीले ‘रिकभर’ गरिरहेको छ । घटनाको सूक्ष्म तरिकाबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अर्की निर्मला पन्तको अवसान
घटना र परिवेश कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको जस्तै भएकाले उनले न्याय नपाउने हुन कि भन्ने धेरैलाई आशंका छ । त्यसैले उनको न्यायको लागि विद्यार्थीदेखि राजनीतिज्ञसम्मले खबरदारी गरिरहेका छन् । २०७५ साउन १० गते निर्मला पन्तको शव पनि भागरथीकै जसरी भेटिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनका आमाबुबाहरु उनको न्यायको लागि सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवाससम्म पुगिसकेका छन् तर न्यायको नाममा सास्ती मात्रै खेप्नु परेको छ ।
देशभर उनको न्यायको लागि नागरिक तहबाटै विभिन्न आन्दोलनहरु भए तर ती आन्दोलनहरुले न्यायको ढोका खोल्न सकेका छैनन् । भागरथीको बीभत्स मृत्युको खबरले देश नै शोकमग्न अवस्थामा छ । उनको परिवारमा घटेको यो बज्रपातले जोकोहीलाई पनि स्तब्ध बनाएको छ । कतिपयले यो घटनालाई अर्की निर्मला पन्तको अवसानका रुपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन् । पन्त र उनको घटनाको प्रकृतिमा समानता भएका कारण पनि यी दुवै घटना समान प्रकृतिका भएको धेरैको बुझाइ छ । बैतडीमा घटनालाई लिएर विभिन्न आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । अब उनको न्यायको ढोका खुल्ला या ठूलै ताल्चा लाग्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।